I-East Nashville Guesthouse enesitayela esikhululekile - I-Airbnb
I-East Nashville Guesthouse enesitayela esikhululekile
389 okushiwo abanye
Nashville, Tennessee, i-United States
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Jon
Zitholele umdlalo webhodi endaweni ethokomele yaleli khaya elinesitayela, elipholile imizuzu eyi-10 nje ukusuka edolobheni laseNashville. Amasheluvu acwebile avulekile, iphalethi yombala ohlanzekile, omaphakathi, namathoni ampunga kudala indawo enokuthula eduze nesenzo.
Imvume Yokuqasha Yesikhathi Esifushane ye-Davidson County #201602189
“Sicela ujabulele ifulethi lethu elithule, elinethezekile ngenkathi uhlola i-Music City.”
– Jon, umbungazi wakho
I-TV yekhebula, umbhede we-queen, Umshini wokuphephetha esophahleni, Umshini womoya oqandisayo
4.98 out of 5 stars from 389 reviews
4.98 (izibuyekezo ezingu-389)
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-389
Ifulethi litholakala emhumeni ongaphezulu kwegalaji lethu futhi lihlukene nendlu enkulu, liqinisekisa ubumfihlo obuphelele. Izindawo ze-5 Points kanye ne-Walden zingaphakathi kwebanga lokuhamba, futhi inhliziyo ye-Music City ikude ngemizuzu nje.
Ibanga ukusuka e- Nashville International Airport
Imizuzu engu-14 oyihamba ngemoto uma ukuminyana kwezimoto kungekho emgwaqeni
I am a Nashville native and have lived in East Nashville for 27 years. My partner Chad and I have been Airbnb hosts and guests since 2015. Our Airbnb apartment is over our garag…
Hlola ezinye izinketho ezise- Nashville namaphethelo